10 Oracle Fanofanana momba ny fampiofanana momba ny asa | | NY
Ny 10 Oracle Fampiofanana ny Courses & Certification dia afaka manome anao fitomboana eo amin'ny asa aman-draharahanao
Oracle Training Courses & Fanamarinana
4. Oracle Database 11g: Data Administration Administration Release 2
5. Oracle Database 11g: Atrikasa fitantanana mamoaka 2
6. Oracle Database 12c: Fitantanana
7. Oracle 11g R2 New Features
Ny tahiry Oracle dia fametrahana fampahalalana izay heverina ho vondrona. Ny anton'ilay tahiry dia ny fametrahana sy ny famerenana ny angona mifandraika. Mpanome tolotra database iray no fomba hikarakarana ny olana momba ny fitantanana ny data. Amin'ny ankapobeny, ny serivera dia mifamatotra amin'ny fampahalalana marobe amin'ny sehatra multiuser mba hahafahan'ny mpanjifa maromaro miaraka amin'ny fampahalalana mitovy amin'izany. Mahay mandanjalanja izany. Mpanome tolotra iray ho an'ny database koa dia miandrandra ny tsy nankatoavina ary mahazo valiny mahomby amin'ny fanarenana fahadisoam-panantenana.
Oracle Database no loharanon-kevitra lehibe indrindra natao ho an'ny fikambanana ara-barotra goavana, ny fomba manara-penitra indrindra sy manara-penitra amin'ny fanaraha-maso ny data sy ny fampiharana. Ny fanatanterahana ny fizotry ny matroka dia mampiavaka ny sehatry ny indostria, ny fahaiza-manaony sy ny server. Amin'ny alalan'io rafitra io, ny rafitra vaovao tsirairay dia afaka haingana avy any amin'ny dobo misy ny ampahany. Tsy misy fepetra takiana amin'ny asa fiasan'ny pinnacle, satria ny fetra dia mety ho tafiditra ao an-trano na any amin'ny valan-javaboary araka ny takiny.
Ny tranonkala dia manana rafitra sy rafitra ara-batana tsy miovaova. Koa satria ny rafitra ara-batana sy mahaleotena dia mahaleotena, ny fikarakarana ara-batana ny fampahalalana dia afaka manara-maso tsy misy fiantraikany amin'ny fidirana amin'ireo rafitra mitahiry fiompiana. Ny sasany amin'ireo Oracle Training and Certifications dia omena etsy ambany:
Ny fiofanana momba ny fitantanana ny orinasa Oracle Solaris 11 dia manasongadina ny votoatin'ny rafitra fototra momba ny orinasa fototra ao Oracle Solaris 11.3 OS. Ireo fepetra azo antoka dia mandalo amin'ny fampidirana ny rafitra miasa eo amin'ny sehatra tokana, hanamarina sy hanaovana fanadihadiana tena ilaina. Ny fandaharam-pianarana Oracle Solaris 11 dia natao hanolotra mpiandraikitra vaovao momba ny rafitra, ary koa manandratra ny mpitantana ny rafitra vaovao ho an'ny rafitra Operating System Oracle Solaris 11, miaraka amin'ny fahaiza-manao izay tsy maintsy ataony amin'ny fomba mahomby sy mahomby ny asany.
Ataovy ny fametrahana ny programa famolavolana sy ny fampivoarana ny programa.
Fitsaboana, fitsaboana ary fanaraha-maso.
Manoritsoritra ny fanangonana, ny faritra, ny rafitra ary ny mpanjifa.
Tombontsoa ho anao
Ny fianarana dia manome fahatakarana mifantoka amin'ny fifantohana amin'ny famolavolana drafitrasam-pandrafetana fototra amin'ny tanjona amin'ny fanomanana ny asa fanatanterahana rafitra.
Ity fanofanana ara-pahasalaman'ny Oracle Solaris 11 Security ity dia manampy anao hanatsara ny fianarana sy ny fahaiza-manao hanovana ny fiarovana amin'ny rafitra miasa ao amin'ny Oracle Solaris 11. Ireo mpampianatra ao amin'ny Oniversite Oracle dia hanampy anao hanadihady ireo karazana fiarovana vaovao tafiditra ao amin'ny Oracle Solaris 11.1 sy Oracle Solaris 11.2; fantaro ny fomba fampiasana ireo endri-javatra ireo mba hampihenana ny loza ateraky ny fanelingelenana ary hiantoka ny fampiharana sy ny fampahalalam-baovao.
Asio marika fiarovana sy fiarovana.
Miaro ny zon'ny mpanjifa, mitantana zo, antontan-taratasy ary raketina.
Ampiasao ny fitantanana kriptografika, mandamina ny filaminana, ny filaminana sy ny fiarovana.
Mifehy ny filaminana sy ny fitantanana.
Manaova horonam-peo marina momba ny fahitsiana sy ny fiarovana ara-piarovana.
Rehefa mandao ity lesona ity ianao, dia hivoaka miaraka amin'ny fahazoana tsara kokoa ny orinasam-piarovana Oracle Solaris 11.2 sy ny fanavaozana vaovao natao tamin'ny OS. Izany dia ahafahanao mandamina ny fangatahana fampiasa tianao indrindra amin'ny antsalany, antsasak'izay ary ny antsasany, na ny manokatra. Ity fampianarana ity koa dia hanampy anao hahomby amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana, mandritra ny fametrahana sy fanamarinana ny filaminana amin'ny solaris 11.
Ampitomboy ny orinasa Oracle Solaris 11.2 OS
Ity fizarana ity dia manitatra eo amin'ny sehatry ny fandaminana ara-panabeazana izay ampianarina ao amin'ny kilasy fitantanana ny orinasa Oracle Solaris 11.2. Hiara-miasa amin'ireo mpampianatra Oracle mpampianatra ao amin'ny Oniversite ianao mba hamolavola ny fahatakarana lalina ny endri-piarovana Oracle Solaris 11.2 izay ahafahanao mitarika amin'ny asanao isan'andro.
Aza hadino fa
Raha toa ka tsy manana fifanakalozan-kevitry ny rafitry ny rafitra Oracle Solaris 11 ianao, dia tokony haka voalohany ny fandaharan'asan'ny Oracle Solaris 11 System Administration sy ny Oracle Solaris 11 Advanced System Administration voalohany mba hanome toky ny fianarana mandrisika ny fandaminana rafitra Oracle Solaris 11 alohan'ny hanaovana ezaka raiso ity làlana mafy orina ity. Ireo izay manana traikefa amin'ny Oracle Solaris 10 dia tokony hitondra ny fivoarana mankany amin'ny Oracle Solaris 11, satria mihatra amin'ny fianarana Oracle Solaris 10 izany ary manome fampiofanana fanampiny mahazatra amin'ny traikefa anananao.
Ity fampiofanana Oracle Solaris 11 Advanced Advanced System ity dia manome fiaraha-miasa amin'ny Oracle Solaris 11.3. Hianatra ny sain-kevitra ianao ary handrindra hevitra momba ny fandaminana amin'ny alalan'ny fitovian'ny lesona sy ny asa an-tanana izay hanamafy ny fianaranao.
Fitsaboana amin'ny oversee sy ny tranona fitantanana mampiasa SMF.
Fandaharam-potoana fametrahana fandaharana amin'ny fampiasana IPS.
Mandehana ary avereno averina indray ny fampiasana ZFS.
Manamboara rafitra sy rafitra avo lenta.
Oversee mandamina ny fitantanana.
Alefaso ireo faritra.
Fiarovana ny Oracle Solaris 11 OS.
Ampidiro Oracle Solaris 11 OS amin'ny mpampiantrano isan-karazany.
Ampiharina ny birao fampahafantarana sy ny soritr'aretina.
Mamoròna fepetra manan-danja sy maika ary fahatakarana tsara kokoa ny fikambanana rafitra Oracle Solaris 11.3 sy fanavaozana vaovao natao ho an'ny OS, izay ahafahanao mandefa ny fangatahanao fangatahana fangatahana amin'ny antsipirihany, antsasak'izay ary ny antsasany, na misokatra misokatra.
Ampitomboy ny orinasa Oracle Solaris 11.3 OS
Ity fizarana ity dia manitatra eo amin'ny sehatry ny fandaminana rafi-pampianarana tantanina ao amin'ny Oracle Solaris 11.3 System Administration. Hiara-miasa amin'ireo mpampianatra Oracle mpampianatra ao amin'ny Oniversite ianao mba hanatsarana ny fahatakaranao lalina ny Oracle Solaris 11.3 OS izay azonao iharanao amin'ny asanao isan'andro.
Fanamarihana azafady: Ity no fianarana farany
Ity dia fandaharam-pampianarana izay mitsambikina eo amin'ny toerana mahaliana ny manamboatra sy manitsy ny rafitra Oracle Solaris 11. Raha toa ka tsy manana ny fifanakalozan-kevitry ny rafitra Oracle Solaris 11 ianao, dia tokony haka ny orinasa Oracle Solaris 11 System Administration voalohany mba hanomezana antoka ny fampahalalana mahomby momba ny fandaminana rafitra Oracle Solaris 11. Ireo izay manana traikefa amin'ny Oracle Solaris 10 dia tokony hitondra ny fivoaran'ny Oracle Solaris 11, satria mihatra amin'ny Oracle Solaris 10 ny fampahalalana ary manome fampiofanana maromaro hafa miorina amin'ny traikefanao.
4. Oracle Database 11g: Fitantanana ny Data Guard Afaho ny 2
Ity Oracle Database 11g: Data Guard Administration Famoahana ny 2 fanofanana dia manampy anao hanatsara ny fahaiza-manao ampiasaina ny Oracle Data Guard mba ahazoana antoka ny tahirin-tsakafo Oracle amin'ny fananganana sy ny fampidinana tsy tapaka. Diniho ny fomba azo ampiasaina amin'ny Data Guard ireo tahiry tahiry azo ampiasaina mba hanamafisana ny fahaiza-mamorona, ohatra, fanambarana, fanadihadiana ary fitsapana, raha toa ka misy ny ampahany amin'izany.
Ny fividianana entana an-tsokosoko dia mila sehatra iray hafa
Ny fanamafisana ny fanamoriana dia mila rafitra iray hafa
Manangana rafi-pamokarana mahazatra
Miantoka haingana, matanjaka, azo antoka ary tsotra hanaraha-maso ny famonoana. Mampitombo ny enta-mavesatr'ireo data daty, mampidina ny sarany amin'ny IT ary mampitombo ny karazana fitantanana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny sendikà miadana sy haingana ao anatin'ny Datacenter.
Ity fianarana ity dia manadihady ny momba ny Data Guard, ny fametrahana ny angon-drakitra ara-batana sy mahomby ary ny fizotran'ny fizarana. Ireo mpanabe mpampianatra koa dia hanampy anao hamotopototra ireo toetra Oracle Data Guard 11g, anisan'izany ny Oracle Active Data Guard sy ny tahirin-kevitry ny standby.
5. Oracle Database 11g: Atrik'asa fitantanana I Afaho ny 2
Ity Oracle Database 11g: Atrikasa fitantanana mamoaka 2 fianarana dia manadihady ny tena zava-dehibe amin'ny fandaminana ny fandaharanasa database. Ireo mpampianatra Master Oracle dia hanamafy ny lohahevitra amin'ny fomba fanao mahazatra izay hametraka anao amin'ny fampitahana ny fanadinana avy amin'ny orinasa Oracle Certified Associate.
Ampidiro ny rafitra fananganana orinasa Oracle.
Manaova ary manaraha ny mpanjifa.
Mampidira sy mamorona Oracle Database.
Manamboara sy manara-maso ireo rafitra mpanangona.
Atsaharo ny Oracle Database.
Ampahafantaro ny orinasan'ny fandraketana Oracle ary ny fomba ampiasain'ireo sehatra ireo sy hifandraisana.
Manaova fanamafisana sy fitsaboana.
Miantoka haingana, matanjaka, azo antoka ary tsotra hanaraha-maso ny famonoana. Ampitomboy ny tahirin-tsakafon'ny database, ento ny vidin'ny IT ary ampitao ny karazana fitantanana avo lenta amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fitambaran-tsakafo sy haingana ao anatin'ny Datacenter.
Mamorona tambajotra momba ny asa
Ho hitanao amin'ny fomba hafa koa ny fomba fanaovana ny banky angona sy ny fifanarahana amin'ny rafitra samihafa amin'ny fomba mahomby sy mahomby. Izany dia mirakitra ny fanamarinana ny famonoana, ny filaminana momba ny fandraketana, ny fitantanana ny mpanjifa ary ny fanamafisana / famerenana ny rafitra.
Ity Oracle Database 11g: Atrikasa fitantanan-draharaha mamoaka 2 dia mandrindra ny filàna fampiofanana ho an'ny lalana Oracle Certification. Mpampianatra iray nandroaka tao amin'ny tranokala (LVC, LWC), ny kilasy (ILT) na ny Training On Demand dia manome fahafaham-po ny filàna. Raha tsy tadidinao ny manamarika fa ny fianarana samirery momba ny fianarana samirery sy ny Knowledge Center dia tsy mahafeno ny fepetra fampiofanana.
Ny Oracle Database 12c: Workshop Administration dia hampiseho anao momba ny engineering Oracle Database. Ho hitanao ny fomba hifampiresahana amin'ny orinasa Oracle Database, mamolavola ny Oracle Network Environment ary manohana ny fanohanan'ny rindrambaiko. Amin'ity lalana ity dia hahafantatra ny Oracle Database Cloud Service ianao.
Manaova ary miaraha amin'ny Oracle Database Instance.
Manamboara sy manara-maso ny firaketana firaketana.
Amboary ny tontolo manodidina ny Oracle.
Alao sary an-tsaina ny tahirin-kevitra ary jereo ny famonoana.
Mianara antontan-kevitra fototra momba ny fanamafisana sy ny rafitra fanarenana.
Ampiasao ny Workerch Support Support Oracle sy ny Oracle Support ho an'ny fampivoarana ny programa Oracle Database.
Mianara hahatakatra ny Oracle Database Cloud Service.
Miantoka haingana, azo ianteherana, azo antoka ary tsotra hanaraha-maso ny famonoana. Ampitahao ny fitahirizana ny tahirin-databatra, ampidino ny fandaniana IT ary ampitao ny karazana fitantanana avo lenta amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny sendika eo amin'ny tahirin-databatra.
Mandray anjara amin'ny fampitaovana sy ny fihetsiketsehana an-tanana
Ny fitarihana an-dalam-pitaovana maoderina sy ny fampisehoana an-tanana dia hanome anao ny tena traikefa. Amin'ny fandraisana anjara amin'ny hetsika an-tànana mba hanamafisana ny fianaranao, ianao dia hikiry hitady ny aptitudes mba ahafahana mifandray amin'ny Oracle Database.
Ity Oracle Database 11g: Workshop Fampandehanana Release 2 dia manadihady ny zava-dehibe amin'ny fandaminana ny fandaharan-drafitra fototra, anisan'izany ny fomba fampidirana sy fitazonana ny Oracle database. Fantaro ny momba ny engineering ary ny fomba fiasa sy ny mpiara-miasa. Manaova fanamafisana sy famerenana amin'ny laoniny ary manadihady sy manamboatra ny fahadisoan'ny vaovao. Asehoy ireo segondra tena izy ny tahirin-tserasera toy ny fahatsiarovana, ny famonoana sy ny fananana mampiasa Oracle Database 11g.
Ao anatin'ity fampiofanana Oracle Database 11G Advanced PL / SQL ity, ireo mpampianatra Oracle University mpampianatra dia hanampy anao hanadihady ireo endri-pandehan'ny PL / SQL mba handrafetana sy hampifanaraka PL / SQL. Hahafantatra ianao hoe ahoana no ahafahana mifandray amin'ny tahiry sy ny fampiharana samihafa amin'ny fomba tsara indrindra.
PL / SQL mamolavola fomba fiasa.
Ataovy fampiharana PL / SQL izay fampiasana fanangonana.
Manangana tahiry virtoaly virtoaly miaraka aminà fehezam-boninkazo mahazatra.
Ampio code mba hifanaraka amin'ny C sy Java applications.
Manorata kaody hanohanana hetsika goavana sy hampiasana SecureFile LOBs.
Mampifanaraka sy mampifanaraka ny code PL / SQL mba hanamafisana ny famonoana.
Ampitahao ny maha-zava-dehibe ny fitenin'ny SQL amin'ny PL / SQL ny dikan'ny codec. Izany dia hanampy ny fikambananareo hahatakatra ny tombontsoa feno amin'ny fampiasana fomba fanao tsara indrindra Oracle.
Daty Private Private Database
Hahafantatra ihany koa ianao amin'ny Virtual Private Database (VPD) ho fampiroboroboana ny fiarovana. Miantehitra fomba fiasa sy fitaovana entina hanamafisana ny fampiharana amin'ny fanafihana fanafihana SQL. Manadihady ny fahombiazan'ny fandaharanasa, fampiasana ny drafitra C sy Java ivelany, takelaka PL / SQL ary ny endriky ny voatavo.
Ity Oracle Database 12c: Fampiofanana PL / SQL Advanced dia mampiseho anao ny fomba fampiasana ny sariohatry ny PL / SQL mba hanondroana sy hampifanaraka PL / SQL mba hifanaraka amin'ny tahiry sy ny fampiharana samihafa. Ireo mpampianatra ao amin'ny Oniversite Oracle dia hanampy anao hanadihady ireo singa miavaka amin'ny famolavolana fandaharana, ny bundles, ny cursors, ny fanamafisana ny rafitra sy ny fihenanam-pandaminana.
Mampiditra programa PL / SQL mahomby.
Hamantatra ny fahombiazan'ny fandaharana.
Ampiasao ivelan'ny drafitra C sy Java.
Ampiharo ny fomba fiasa PL / SQL fanekena.
Manorata kaody miara-miasa amin'ny C sy Java applications.
Mamoròna code mba hifanaraka amin'ny fanontaniana lehibe ary ampiasao ny SecureFile LOBs.
Mampifanaraka sy mametaka PL / SQL mamela ny famongorana ny famonoana.
Karohy ny fomba fametahana fomba fanao PL / SQL izay mandinika ny fangatahana PL / SQL sy ny fomba fitehirizana izay manatsara ny famonoana. Amin'ny fametrahana ny loharanom-pitaovana amin'ity andian-dahatsoratra ity dia ho fantatrao ny Datamin'ny Private Private Database (VPD) mba hampiharana ireo fepetra fiarovana sy famotopotorana ny fomba sy fitaovana hanamafisana ny fampiharana ny fanafihana SQL. Fampiroboroboana ny famatsiam-bola amin'ny alalan'ny famolavolana programa PL / SQL izay mifandray amin'ny code C sy Java.
Ity fampisehoana iray andro iray ity ho an'ny MySQL 5.6 dia mandrindra ny endri-javatra vaovao sy ny fanatsarana hafa amin'ny MySQL 5.6 sy ny MySQL Enterprise Edition, anisan'izany ny famonoana, ny fampifanarahana, ny fidirana sy ny fanamafisana. Ireo mpampianatra ambony ao amin'ny Oniversite Oracle koa dia hitarika demo mivantana.
Mpianatra afaka mandray soa avy amin'izany:
Ny mpanjifa vaovao avy amin'ny MySQL, izay tsy dia nandray firy tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny rafitra momba ny fitantanana tambajotra sosialy.
Ny mpividy MySQL eo an-toerana izay mikatsaka ny hahita ny zava-mahasoa vaovao azo raisina amin'ny famoahana MySQL 5.5
Amboary ny fampiasanao ny loha-hevitra mySQL 5.6 dia mamoaka araka ny tokony ho izy.
Ny sasany amin'ireo lahatsoratra mifandraika amin'izany:
Fanofanana Database ao Gurgaon | Fanamarinana Databotsy ao Gurgaon
Tari-dàlana hanombohana ny fanamarinana Oracle Database
Ny hoavin'ny Oracle E-Business Suite sy ny vaovao farany amin'ny hoavy
Famaritana ny Oracle Dashboard